China Separation CSTR ifektri abakhiqizi | IBoselan
Ukwehlukaniswa ngokuzimela kwe-CSTR, efanelekile kumabhizinisi amancane naphakathi naphakathi okukhiqiza ama-biogas kanye namaphrojekthi ezizimele okuthuthukiswa kwepulazi elizimele Ukwehlukaniswa komnikazi wegesi kanye nethangi le-anaerobic kusiza ukuphathwa nokugcinwa kwegesi, kanye nokugcinwa kwemishini. Yamabhizinisi namapulazi. ngomthamo omkhulu wokukhiqiza igesi, umnikazi wegesi ohlukile angagcina igesi ngaphandle kokubangela imfucuza. Inganikeza ukushisa, ukukhiqiza amandla nokupheka kahle. Ihlanganiswe nokukhiqizwa kwamandla elanga, ingakwazi ukubona ngokuphelele uhlelo olwanele lomnotho wezemvelo.
Langaphambilini Ukuhlanganisa i-CSTR
Olandelayo: Ukuhlanganiswa kweqembu i-CSTR